कोरोना महामारीः आयुर्वेदको भरोसा |
कोरोना महामारीः आयुर्वेदको भरोसा
२०७८ बैशाख २५ गते, शनिबार , ०५:३० मा प्रकाशित
सुर्खेत। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट शुरु भएसँगै वीरेन्द्रनगर ९ लाटीकोइलीका प्रचण्ड पोखरेलका परिवारका तीन जना सदस्यहरुमा फरक–फरक समयमा सङ्क्रमण देखियो। लक्षणसहितका ती सङ्क्रमित सदस्यको औषधि उपचारका लागि यो परिवारले नजिकको मेडिकल वा अस्पताल धाएनन्। बरु, सङ्क्रमितलाई प्रयोगशालाले दिएको कोरोना ‘पोजेटिभ रिर्पोट’ लिएर प्रचण्ड कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पतालसंगै जोडिएको आयुर्वेद औषधालयमा तीन पटक पुगे। “सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरु घरमै आइसोलेशनमा बसे, घरायसी पौष्टिक खानेकुरादेखि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधि लिएर खुवाएँ,” प्रचण्ड भन्छन्, “अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएको छैन्, ज्वरो, रुघाखोकी देखिएको थियो, आयुर्वेदिक औषधि सेवनबाटै सञ्चो भयो।”
केही दिन अघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि त्यहाँबाट पनि कर्मचारीहरु आयुर्वेदिक अस्पताल पुगे। यी त पछिल्ला केही उदाहरण हुन्। एकै दिन ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउँदा अस्पताललाई औषधि पु¥याउन मुस्किल पर्ने गरेको छ। अस्पतालका प्रमुख डा. शङ्करप्रसाद रिजालले सामान्य अवस्थामा दैनिक ४० देखि ५० जना तथा असामान्य अवस्थामा ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेको बताए। उनका अनुसार धेरै कर्मचारी भएका सार्वजनिक कार्यालय, सुरक्षा निकायका व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएमा आयुर्वेद अस्पतालमा ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ।
आयुर्वेद अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र कोरोना महामारीपूर्व ओझेलमा थियो। औषधालयहरु पनि सुनसानजस्तै देखिन्थे। रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने भनेर व्याख्या गरिएका गुर्जो, मृगमदाशव, तुल्सी चिया, जेठीमधु चुर्ण, अमलाचूर्ण, रस्वगन्धा चूर्ण र च्वयनप्रास लिन सेवाग्राहीहरुको भीड लाग्ने गर्दछ। अचेल सर्वसाधारणदेखि महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको रोजाइँ आयुर्वेदिक औषधितर्फै परेको छ। आयुर्वेदिक औषधि लिन यहाँ प्रदेश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र तीनका आफन्तहरुसमेत आउने गर्दछन्। “आयुर्वेद क्षेत्रप्रति विश्वास बढ्दै जाँदा खुसी लाग्छ,” डा. रिजालले भने, “यतिबेला एलोप्याथी (आधुनिक चिकित्सा पद्धति) प्रयोग गर्नेहरु पनि आयुर्वेदिक चिकित्सामा विश्वास गर्न थालेका छन्।”
औषधालयले सबैहरु औषधिहरु निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएयता ८०० बढी सङ्क्रमित तथा तीन आफन्तहरुले आवश्यक परामर्शका साथै औषधि लिइसकेका छन्। यस अवधिमा ४०० क्विन्टल गुर्जो खपत भइसकेको छ। गत वर्ष जेठदेखि मङ्सिर महिनासम्म १८ हजार बढी नागरिकले आयुर्वेद सेवा लिएको तथ्याङ्क छ। यसका साथै सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक कार्यालय, विभिन्न होटल तथा अस्पतालमा सञ्चालित आइसोलेशनबाट सङ्क्रमितका नाउमा एकमुष्ट औषधि वितरण गर्ने गरिएको छ।
माग बढ्दै गएपछि मौज्दात औषधिहरु पनि सकिन लागेको बताइएको छ। डा. रिजालले भने, “यही अनुपातमा माग बढ्दै गए अबको १०–१५ दिनमा मौज्दात औषधि पनि सकिन्छ होला, सामाजिक विकास मन्त्रालय समक्ष थप बजेटको अनुरोध गरेका छौं।” कर्णालीका वन जंगलहरुमा जडिबुटी पर्याप्त भएपनि सङ्कलन, प्रशोधन गर्ने जनशक्ति नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ।
५० शैय्याको आइसोलेशन
प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालले ५० शैय्याको अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलेशन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले योगाहल र अस्पतालको माथिल्लो तलालाई आइसोलेशनका रुपमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए। “शुरुमा २५ शैय्याको सञ्चालन गर्छौं, शनिबार साँझसम्म छ थान अक्सिजन सिलिन्डर आउँदैछ,” उनले भने, “सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले पूर्व तयारीका लागि आइसोलेशन व्यवस्थापनलाई जोड दिएका हौं। अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलेशन निर्माण गरेपनि अस्पतालमा भने नर्सिङ स्टाफको दरबन्दी छैन्।
अघिल्लो सामाग्री२८ सांसदलाई कोरोना संक्रमण
पछिल्लो सामाग्रीसंकटमा सत्ताः विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय